တရုတ် Fixed TPR Castor ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |နည်းပညာ
ဘီးအချင်း-50mm 75mm 100mm
Load Capacity-40-80 ကီလိုဂရမ်
ဘီးပစ္စည်း-TPR နင်း PP အနားကွပ်
အသီးအနှံ-ရိုးရိုး၊ roller၊ ball bearing တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အရောင်-မီးခိုးရောင် အနက်ရောင် ရှိတာပဲလေ။
ဖိထားသော စတီး၊ သွပ်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် နှစ်ထပ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆုံလည်ခေါင်း။
ဘီးများကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ဓာတုရာဘာ (TPR) ပစ္စည်းအသစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ဤထုတ်ကုန်သည် အဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး ညစ်ညမ်းမှုမရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်နိုင်သော ပစ္စည်းဖြင့် ပါဝင်သည်။
အလွန်တိတ်ဆိတ်ခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းခံနိုင်ရည်၊ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း စုပ်ယူမှု နှင့် ကူရှင်များ ပါရှိပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် လည်ပတ်နေပါသည်။
ဘီးအူတိုင်သည် အဆိပ်မရှိသော အနံ့မရှိသော ခိုင်ခံ့ပြီး အကြမ်းခံသော ပိုလီပပီလင်း (PP) ဖြင့် ဆေးထိုးပုံသွင်းထားသည်။၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘီးအူတိုင်သည် တောင့်တင်းမှု၊ တောင့်တင်းမှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဖိစီးမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော လက္ခဏာများရှိသည်။
ဘီးများ၏ anti-static ဗားရှင်းကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
တူညီသောစီးရီးတွင် လှည့်ပတ်နှင့် ဘရိတ်များလည်း ရှိပါသည်။
ပစ္စည်းနံပါတ် ဘီးလုံးပတ် ဘီးအနံ စုစုပေါင်းအမြင့် အပေါ်ဆုံးပန်းကန်အရွယ်အစား Bolt Hole Spacing Mounting Bolt အရွယ်အစား Load Capacity
A.FX01.B15.050 50 18 73 ၅၄×၅၄ ၄၀×၄၀640
A.FX01.B15.075 75 24 ၁၀၃ 60×60 ၄၂×၄၂660
A.FX01.B15.100 ၁၀၀ 24 ၁၂၄ 60×60 ၄၂×၄၂680
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ အစားအသောက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှု၊ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၊ တွန်းလှည်းများ၊ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ အရောင်းပြခန်း၊ ပြကွက်၊ စူပါမားကတ်ဈေးဝယ်လှည်းများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များ။
MOQ သည် $1000 ဖြစ်ပြီး သင်သည် မတူညီသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ရောနှောနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရရှိနိုင်သောနမူနာကို အခမဲ့ပေးဆောင်ပြီး ပို့ဆောင်ခပေးဆောင်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။တင်ပို့ရန် 5-7 ရက်ကြာသည်။
Q3။သင်၏ ငွေပေးချေမှု စည်းမျဥ်းများကား အဘယ်နည်း။
ယေဘုယျအားဖြင့် T/T 30% စပေါ်ငွေ၊ လက်ကျန်ငွေကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ပေးချေရပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် T/T၊ LC နှင့် ခရက်ဒစ်ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် FOB၊ CIF၊ EX Work စသည်တို့ကဲ့သို့ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို လက်ခံနိုင်သည်။
Q5။မင်းရဲ့ အဓိက စျေးကွက်က ဘယ်မှာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစျေးကွက်မှာဥရောပဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ် 20 ခန့်ဥရောပအုတ်ညှပ်များနှင့်ဘီးများကိုအထူးပြုခဲ့သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဖောက်သည်များ၏တစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ပြုလုပ်ရန် တွန်းလှည်းများနှင့် ဘီးများကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည်။သင့်တွင် ကိုယ်ပိုင်နမူနာနှင့် ဒီဇိုင်းရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ရန် ကြိုဆိုလျက် သင့်အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ယူနစ်စျေးနှုန်းကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Q7။မင်းရဲ့ Castor တွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ငါ ဘယ်လိုယုံနိုင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုရှိပြီး ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ရန် အတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော်ရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ရှိသည်။အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာများကို ပေးပို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များသာလျှင် ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ဦးတည်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။
Q8။ဖောက်သည်များနှင့် ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို သင်မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်နည်း။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းများရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်တိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေအဖြစ် လေးစားကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ကြပြီး ၎င်းတို့နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြသည်။
ယခင်- TPR Castor ကို Plate ဖြင့် ဘရိတ်အုပ်ပါ။
နောက်တစ်ခု: Swivel Black ရော်ဘာဘီး ဝမ်းနုတ်ဆေး Plate
လောလောဆယ်မှာ ဘာအကြောင်းအရာမှ မရှိပါဘူး။
TPR Castor ကို Plate ဖြင့် ဘရိတ်အုပ်ပါ။
ပန်းကန်ပြားဖြင့် လှည့်ပတ် TPR Castor